Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Jamaica njem njem » Onye Jamaica na-ahụ maka njem nleta na njem: Iwuli elu ike - njem njem 2021 na gafere
Onye Jamaica na-ahụ maka njem nleta na njem: Iwuli elu ike - njem njem 2021 na gafere
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, mere ngosi mgbe arụmụka ngalaba nke 2021-2022 na isiokwu ahụ: Iwuli Ọganihu Ike: njem nleta 2021 na gafere.
Ihe ngosi nke Minista ahụ lekwasịrị anya na usoro ọhụụ iji wughachi njem nlegharị anya, nke COVID-19 metụtala.
Onye ọrụ gọọmentị nke mbụ gosipụtara banyere nje COVID-19 bụ na mbido Disemba 2019 na-ebute mbido mbụ nke mmetụta na akụnụba ụwa.
N'ụwa niile, njem na njem nleta furu efu oke ihe ruru ijeri US $ 4.5 na 2020.
Gụọ ihe ngosi nke Mịnịsta njem na-eme njem Hon. Edmund Bartlett na Jamaica Tourism 2021 na Beyond na ya dum.
Okwu Mmalite na Ekele
Onye isi okwu Nwanyị, e wedara m ala na enyerela m ikike ijere ụmụ amaala mba anyị hụrụ n’anya afọ ọzọ. Obi dị m ụtọ site na nkwupụta dị mma nke nkwado sitere n'aka ndị otu nọ n'akụkụ abụọ nke onolọ a Kwesịrị Ekwesị, ka anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndị anyị pụọ na ịda ogbenye gaa na ọganihu n'oge ihe siiri afọ siri ike maka Jamaica na ụwa dum.
Ihe ngosi m, na nke a 32 mnd oge na-ekwu okwu banyere Hlọ a Dị Mma, ga-elekwasị anya na ọganihu anyị mere, site na iji usoro ọhụụ, iji wughachi ụlọ ọrụ anyị, bụ nke ọrịa COVID-19 metụtara.
Madam Ọkà okwu, ọ bụ nnukwu ihe ùgwù ka a họpụta ya dị ka onye nnọchianya nke ndị mmadụ ma nye ya nnukwu ọrụ a nke iwulitekwu ike, isi ụlọ ọrụ mba anyị - njem. Ya mere, m na-amalite site na-ekele Chineke maka ịgọzi m ahụ ike na ume iji nye ndị ndu chọrọ iji mezuo ọrụ a na nnukwu ihe ịga nke ọma.
Page 1 nke 11 Na Mbụ Osote